भोलि, कसैले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाकाका*रण आ*त्मह*त्या ग*रेको हूँ भनेर पा*सो लगायो भने उहाँहरु जे*ल जानुपर्छ कि पर्दैन ?
काठमान्डौ , सिधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता रबि लामिछाने प*क्राउ परे संगै पत्रकार प्रेम बानियाँले रवि लामिछाने पक्राउ प्र*करणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । रवी लामिछाने प*क्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै ४ प्रश्न उठान गर्नुभएको छ । प्रहरीले हिजो रवीसहित यूवराज कँडेल र एक नर्सलाई पनि नि*यन्त्रणमा लिएको छ । रवी लामिछाने प*क्राउ परेपछी प्रेम बानियाँले यस्तो पोष्ट गर्नुभएको छ । प्रेम बानियाको स्टाटस जस्ताको तस्तै रबिजी Rabi Lamichhane प्रकरणमा प्र*चलित का*नुनको सम्मान गर्दै …
नम्बर १, आ*त्मह*त्या ग*रेको मान्छेको पकेटभित्रको मोबाइलमा रहेको भिडियो ‘इ*डिटेड भ*र्सन’मा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो ? उसलाई का*रबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो त अ*नुसन्धानको विषय थियो र प्रहरी अधिकारी बाहेक अरु कसैले यो सार्वजनिक गर्नै सक्दैन/मिल्दैन ! यदि अ*पराध पुष्टि भयो भने मात्रै प्रहरीले यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्र*चलन किन भु*लियो ? कुल २३ मिनेटको भनिएकाे भिडियोमा खोई बाँकी भिडियो ? अरु पनि त आ*रोपित हुनसक्छन् ?
नम्बर २, भोलि, कोही कसैले क*थम्कदाचित, प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाका नाममा तिम्रा कारण मैले आ*त्मह*त्या गरेको हूँ भनेर पा*सो लगायो भने उहाँहरु जे*ल जानुपर्छ कि पर्दैन ?नम्बर ३, ज*नहितसम्वन्धि कार्यक्रम प्रशारणको अन्तिम तयारीमा रहेकावेला एउटा पत्रकारलाई कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिई न्यूजरूमबाट केवल डेढ घण्टाअगाडि टेलिभिजन स्टेशनमै गएर प*क्राउ गर्दा के त्यो न्या*यिक हुन्छ ? जबकि उसले सार्वजनिकरुपमा भनिसकेको छ ‘यदि म दो*षि ठहरिए का*नुनबमोजिम का*रबाही भोग्न तयार छु ।’ भोलि फेरि कसैलाई यस्तै पर्यो भने … ???
नम्बर ४, नेपाली पत्रकारितामा यो ‘ग्या*ङ्फाइट’को इतिहासले नेपाली समाजलाई अति-तल गि*राएको छ, यसमा हाबि अ*तिवाद् रबिजी बि*रोधी र समर्थकले समाजको रंग कु*रुप देखिएको छ ! अब एउटा बिन्दूमा हामी सबै मिलौं । पत्रकारिता अब सूत्रभन्दा माथि आयो कृपया, सबैले बुझौं ।यी चार सवालहरुका साथ हामी संसारभरबाट बोल्न तयार छौं । के यी प्रश्नहरु गलत छन् ? अब दुनियाँ साँघुरो भइसक्यो । हामी न्या*यका निम्ति जहाँसुकैबाट बोल्न तयार छौं ।कृपया रबिजीलाई ‘अ*तिदेवत्वकरण र अति रा*क्षसिकरण नगरौं’ सं*यमतापूर्वक सम्मानित अदालतको नि*र्णयको प्र*तीक्षा गरौं ।